Osisi eji ebu osisi | ROYI ART gallery
S tretcher Bar Frames - Ready iji maka ihe ọ bụla N'onwe kwaaji oru ngo
Ihe kariri puku iri, iri n’ise omumu ihe omumu maka nnukwu ulo ahia, ndi nlere anya, ndi na ere ahia, ndi ahia ndi ahia iji wee wuputa otutu ihe ndi eji eji osisi eme. Anyị na-ebuga ihe karịrị otu nde osisi mkpanaka osisi osisi kwa afọ na United States, Canada, Australia, UK na Germany.
Ogwe osisi eji aka siri ike nke mkpịsị aka osisi wee rụọ maka mbipụta kwaaji, nke a na-eji osisi eco-friendly eme, kpọgidere anyị n’aka ndị ọrụ a zụrụ azụ - a na-ebucha ụzọ wee rute njikere maka kwaaji gị. Na mgbakwunye na nha 60 dị larịị, anyị nwere ike ịme okpokolo agba agbatị zuru ezu omenala.
Kpakọtara maka iji mfe
Anyị na-ebufe ihe mkpuchi anyị ndị anyị ji kwachie ihe eji emechi ya ka ị nwee ike ịrụ ọrụ ozugbo na igbe ahụ. Anyị na-esonye na paịlị jiri mkpịsị osisi na-eme ihe nkiri. Ogwe osisi anyị na-agbatị anyị niile nwere egbugbere ọnụ ma ọ bụ na-eche ihu iji hụ na a kwụsịrị mkpọsa gị n'elu osisi, belata ihe ize ndụ nke ahịrị ndo ma mee ka ọ dị mfe iji maka eserese.
Otutu profaịlụ na Stretcher bar frame
Profaịlụ nke dị n’elu osisi ebe a na-agbatị mmadụ kwesịrị ịbụ nke gbara ya gburugburu. Nke a nwere uru atọ: - Ọ na-eme ka framer ahụ hụ ma nweta akụkụ doro anya na onyoonyo nke nwere oke ala- Ọ na-enye ohere kwaaji akwa iji “tụgharịa” profaịlụ kama ịghafe n'ọnụ dị nkọ nke bụ nnukwu ihe kpatara mkpọsa mkpọsa. .
- Ọ na - eme ka akụkụ elu nke etiti ahụ dịkwuo elu, nke na - ebelata mkpọsa ya na kwaaji. Nke a ga - eme ka ọ dịkwuo mfe ịdọrọ kwaaji ma mee ka a kuziekwuo ya.
Enwere ọtụtụ profaịlụ mmanya na-adịte aka, yana ọtụtụ ụdị ịkpụ osisi. Yabụ na ọ gaghị ekwe omume ịsị na ihe ọ bụla bụ "ọkọlọtọ." Enwere otutu ọdịiche dị ukwuu na mpaghara na ịkpụ osisi, n'ihi ihe mere eme. N'ihi otu ihe ahụ, osisi a na-eji eme osisi nwere osisi dọrọ iche dịgasị iche iche site na obodo ruo na mba dabere n'oké ọhịa dị ugbu a. Mana imirikiti ndị na-agbatị, iji zere agha na-eme na Nordic painiapia nke ọma si Scandinavia, Russia, na Canada.
Zọ ọzọ enwere ike iwusi ihe mgbochi bụ site na itinye eriri nkwado. A na-adụ ọdụ ka ogologo ya gafere 40 "ma ọ bụ 1m ka ọ dabara na nkwado obe. Site n'ime nke a, ọ na - a hụ na osisi agaghị agba mmiri ma ọ ga - adọwaa.
Ojiji eji agbatị agbatị na ahịa ụlọ obibi abụrụla nke a ma ama na Mbipụta inkjet e biri ebi na-ewu ewu n'ụlọ. Nke a emeela ka ịmụgharị usoro ọhụụ a ejiri n'ahịa nka were ọtụtụ afọ.
Ọ bụ ezie na ndị na-ese ihe na-eji oghere canvases na oghere agbatị agbatị na azụmahịa nka. A na-ejikwa ihe eji akpa ihe eji agbapụta foto na-agbatị nke a n’elu ihe mkpuchi n’elu. Site na kechie kwaaji n'uzo ahu nile, nke anakpo dika ihe nkpogheri eserese, onye na - ese foto nweziri ike kutuo ihe osise ya na mgbidi, enwetala.
Kpọtụrụ anyị taa na a ga-ekenye otu n'ime ndị ọkachamara ọrụ aka na akaụntụ gị yana ịkpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya, dị njikere inyere gị aka n'ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ arịrịọ ọ bụla.
Ka anyị mepụta uru nke na-eme ka asọmpi gị dịkwuo elu.
ndina Ogwe , Aka Oil osise , Abstract Oil osise , Mpekere Mpekere Na Kanvas , Oil sere , Contemporary Oil sere , Ngwaahịa niile.